सफल यौन जिवनका लागि यी ७ काम कहिल्यै नगर्नुस onlinedarpan.com
Tuesday 19th of October 2021 / 10:47:33 PM
सफल यौन जिवनका लागि यी ७ काम कहिल्यै नगर्नुस
अनलाइन दर्पण 2018-07-13
तपाइँहरू आफ्नो बेडरुममा भएको बेला यी कुराहरु भुलेर पनि नगर्नुहोस् । यदि यी कामहरू गर्नुभयो भने तपाइँको सेक्स लाइफनै खतरामा पर्न सक्दछ ।
१. बेलुकीको खाना धेरै ढिला खाने काम नगर्नुसः
यदि तपाइँ बेलुकीको खाना धेरै ढिला खाने गर्नुहुन्छ भने यसले तपाईंको तौल मात्र बढाउने नभै तपाईंको सेक्स लाइफलाई नै डामाडोल बनाउँदछ । त्यसैले बेलुकीको खाना थोरै, हलुका र स्वस्थकर हुनु आवश्यक छ । खाना खाएको दुई घण्टापछि मात्र पार्टनरसँग बेडमा जाने तरखर गर्नु राम्रो हुन्छ ।
२. बिदाको बेलामा धेरैबेर समय सम्म नसुत्नुसः
तपाइँ साताभरीको सबै निद्रा बिदाको दिन त होनि भनेर पुर्याउने कुरा सोच्नुहुन्छ भने यसो नगर्नुस । शनिबार धेरैबेरसम्म सुतिरहनाले पनि तपाईंको सेक्स मुडमा शिथिलता ल्याउँदछ । बिदाको दिनमा धेरै समयसम्म सुत्नाले प्राकृतिक साइकलमा हानी पुग्ने भएका कारण तपाईंलाई अल्छी, शिथिल र सेक्सका लागि मुड नै नहुने समस्याले सताउनेछ । अरूबेला जति समयसम्म सुत्नुहुन्छ, त्यति समयमा नै उठ्ने प्रयास गर्नुहोस् यसो गर्नाले तपाइँलाइ फाइदा पुग्नेछ ।
३. पार्टनरसंग केही समय छुट्टै बस्नुहोसः
यदि तपाईं तथा तपाईंको पार्टनर एउटै अफिसमा काम गर्नेगर्नुहुन्छ र अफिसबाट पनि एकसाथ घर जानुहुन्छ भने केहि समयपछि तपाईंलाई बोर लाग्न सक्छ । यसका साथै सधैंभरि एकअर्काको साथमा नै हुनुहुन्छ भने त्यसले तपाइँलाइ असर पार्न सक्छ । यदि आफ्नो पार्टनरसँग सेक्सुयल इन्टिमेसी जगाउन चाहनुहुन्छ भने केहि समयको लागि एकअर्काबाट टाढा बस्नुहोस यसले गर्दा तपाईंले आफू फ्रेस भएको महसुस गर्नुहुनेछ र बेडरुममा तपाइँले केही राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ ।
४. तपाईं पिल्स खानुहुन्छ ?
यदि तपाईं आफ्नो टाउको दुख्नासाथ औषधी खाने गर्नुहुन्छ भने एक सर्वेक्षणमा देखिए अनुसार हाइ ब्लड प्रेसर पिल्स र अरु साधारण औषधीहरुले सेक्सुयल डिजायर कम गर्ने गर्दछ । यसका साथै टेस्टोस्टेरोन लेभल पनि घटाउने गर्दछ । धेरैजसो महिलाहरुले गर्भ नरहोस् भनेर गर्भनिरोधक औषधीहरु दैनिक रूपमा खाने गरेको पाइन्छ । यदि तपाइँ बिरामी हुनुहुन्छ भने पिल्स खाँदा फरक पर्दैन तर पनि डाक्टरको सल्लाह अनुसार मात्र औषधी खाँदा राम्रो हुन्छ ।
५. निरन्तर व्यायाम नगरेमाः
हालै गरिएको अनुसन्धानहरूले देखाए अनुसार निरन्तर व्यायामका कारण तपाईंको सेक्स लाइफमा रौनकता थप्ने काम गर्दछ साथै कार्डियोभास्कुलरको काम र सर्कुलेसन पनि बढाउने कार्य गर्दछ । दैनिक व्यायाम गर्नुहोस वा आफ्नो बगैँचा वा अपार्टमेन्टमा डुल्नु भयो भने पनि यसले तपाईंलाई तनावबाट मुक्ति दिएर सेक्सको लागि मुड अन गर्नमा मद्दत गर्दछ । तर पनि अधिक व्यायाम भने राम्रो हैन ।
६. सुत्ने बेलामा समाचार पढ्ने गर्नुहुन्छः
यदि सुत्ने बेलामा अपराध, सेयर मार्केटको उतार–चढाव, प्राकृतिक प्रकोपका समाचारहरु मोबाइल, टिभी अथवा अनलाईनमा पढ्नुहुन्छ भने यसले तपाईंको दिमागमा तनाव पैदा गर्दछ । जसले बेडमा सेक्सी फिल गर्न अलि गाह्रो हुन्छ । तनावले टेस्टोस्टेरोन लेभल घटाउँछ । यसले तपाईंलाई सेक्समा मन नगएको महसुस गराउँदछ । यसका साथै ल्यापटप र मोबाइलमा ध्यान दिनु भनेको आफ्नो पार्टनरमा मन नजानु पनि हो । सुत्नुअघि इन्टरनेटमा ब्राउजिङ्ग गर्नुभन्दा मनतातो पानीले नुहाउने वा रोमान्टिक गीतहरु सुन्दा राम्रो हुन्छ । यसका साथै सुत्नुअघि आफ्नो पार्टनरसँग कुरा गर्ने बानी बसालेमा पनि यसले एकअर्कामा राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्न सहयोग पुर्याउँदछ ।
७. पोर्न फिल्म तपाईंको प्रेरणा हो भनेः
तपाइँले आफ्नो पार्टनरका साथमा बेडमा केहि वाइल्ड गर्नु भनेको राम्रै हो तर त्यसलाई साँचो र प्राकृतिक बनाउन पनि निकै जरुरी छ । पोर्न फिल्मले तपाईंलाई धेरै आशा गर्ने बानी बसालिदिन्छ । तपाइँले माया र आदर हराउन नदिनुहोस् ।
सेक्सको भरिपूर्ण आनन्द लिन आफूले हेरेका भिडियोभन्दा आफ्नै शैली प्रयोग गर्नुहोस् । यसका साथै दिनदिनै आत्मियताका लागि गरिने कार्यहरु जस्तै किसिङ्ग र अंगालोले बेहेर्ने जस्ता कार्य गर्नाले पनि तपाईंको पार्टनरलाई केहि रमाइलो गर्न मन हुन्छ ।
यी उपायहरू अबलम्बन गरेमा तपाइँको यौन जिवन सफल हुने कुरामा कुनै शंका छैन ।
कुन मानिसलाई कस्तो खालको यौन सम्पर्कको शैली मन पर्दछ भन्ने कुरा समग्रमा भन्न गाह्रो हुन्छ, किनकि मानिसका रुची फरक फरक हुनसक्छन् । हालै एउटा अनलाइन डेटिङ साइटले यस विषयमा अनलाइन सर्भेक्षण गरेको छ । महिलाहरुलाई यौन सम्पर्कका बेला के गरेको मन पर्दछ ? कस्तो खालको संसर्गको शैली मन पर्दछ ? अनि सेक्समा के कुराले मूड अन गरिदिन्छ ? भन्ने विषयमा सोधिएको थियो । उक्त अनलाइन सर्भेक्षणले केही रोचक नतिजा दिएको छ ।
त्यस्तै ६२ प्रतिशत महिलाहरुले यौन सम्पर्कका बेला आफ्नो पार्टनरको जिउका रौँसँग सुम्सुम्याउँदै पाकक्रिडा गर्न मन पर्ने बताए ।
६० प्रतिशत महिलाले यौन सम्पर्कका बेला पार्टनरलाई पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्दा आनन्द आउने बताएका छन् ।
जिउका रौँ तान्नु, नियन्त्रणमा लिनु, फोहोर बोल्नु तथा जिउमा टुक्नुजस्ता व्यवहार गरेर गरिने यौन सम्पर्कलाई महिलाहरुले सबैभन्दा रुचाएको अध्ययनले देखाएको छ ।
चरम सुख या चरमोत्कर्ष भनेको सम्भोग गर्दा प्राप्त हुने तीव्र र आनन्ददायी शारीरिक सुख हो । हस्तमैथुनद्वारा पनि चरमसुख प्राप्त गर्न सकिन्छ । हरेक व्यक्तिको अग्र्याजमको अनुभूति फरक हुन्छ । मनका थुप्रै भावना वर्णन गर्न नसकिए जस्तै अग्र्याजमलाई पनि यही हो भनेर वर्णन गर्न सकिन्न ।
यौन सन्तुष्टिका लागि मानसिक रूपमा सन्तुष्ट हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । पार्टनर, परिवेश, ‘फोरप्ले’लगायत पक्षमा ध्यान दिन सके यौन पार्टनरलाई पूर्ण सन्तुष्टि दिन सकिन्छ ।